अलपत्र मेलम्ची – खानेपानी सचिवको सरूवाले फर्किएला सिएमसी ? - Arthakoartha.com
अलपत्र मेलम्ची – खानेपानी सचिवको सरूवाले फर्किएला सिएमसी ?
काठमाडौं, ९ फागुन । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्ची आयोजना अलपत्रछाडेर भागेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी ठेकदारसँग भएको ठेक्का समझौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेपनि खानेपानी मन्त्रालय भने पुन कम्पनीलाइ फर्काउन प्रयासरत छ । यसका लागि मन्त्रालयले सिएमसीका प्रतिनिधिसँग औपचारिक र अनौपचारिक बार्तालाई जारी राखेको छ । पछिल्लो पटक सिङ्गापुरमा मन्त्रालका प्रतिनिधिहरुले सिएमसिलाइ फर्काउन गरेको प्रयासका कुनै निश्कर्ष पुग्न सकेन । जसका कारण मन्त्रालय भित्र आएको खटपटका कारण सचिव सरुवा सम्मको अवस्था सृजना भयो । मन्त्री विना मगरले सिएमसी फर्काउन सहयोग नगरेको र सीएमसीको मागमा सकारात्मक नभएको र असहयोग गरेको र रकम रोकेर राख्दा सिएमसि भागेको भन्दै सचिव गजेन्द्र ठाकुरको सरुवाका लागि दवाव दिएपछि उनको नेपाल ट्रष्टमा सरुवा गरिएको छ । सचिवको सरुवासँगै सिएमसि मेलम्चीबाट बाहिरीनुलाई मन्त्री र सचिवले एकले अर्कोलाइ दोषारोपण गर्दै आएका छन् ।
मेलम्ची आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । ३ प्रतिशत बाँकी कामका लागि टेण्डर गर्दा आयोजनाको अर्बा लागत बढ्ने, समय अवधि पनि लम्बिने जसरी भएपनि काममा फर्काउने पक्षमा रहेकी छन् । मन्त्री मगरले तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सिएमसीलाई दिएर पुनः उसैलाई काम दिन दबाब दिएको पूर्व समझौता र कानुनले त्यसलाइ रोक्ने हुँदा आफुले नमानेको हुँदा आफन्नो सरुवा भएको ठाकुरले बताएका छन् । २ अर्ब पनि धरौटी नभएको र बाकि काम पनि सकाउन तीन अर्ब नलाग्ने अवस्थमा उसलाई तीन अर्ब ६० करोड दिएर पुन: काम दिनुपर्ने विषय मैले बुझ्रन सकिन उहाँले बुझने सचिव खोज्नु भएको होला त्यसैले आफ्नो सरुवा गरिएको ठाकुरको भनाइ छ ।
ठाकुरको सरुवा पछि खानेपानि मन्त्रालयको सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई ल्याइएको छ । उनको पहिलो प्राथामिकता भनेको मन्त्री विनामगरले भने जस्तै जसरी पनि सिएसिलाई मनाएर काममा फर्काउनु हुने छ। मन्त्री मगरले पनि नयाँ सचिव आएको अव सिएमसी फर्काउन पहल हुने र संभवत सिएमसी काममा फर्कने बताएकी छन् । तर मन्त्री मगरले भने जस्तो सिएमसी काममा फर्कन त्यती सहज भने देखिदै कुनै अतिरिक्त लाभ सीएमसीले नपाएसम्म उ फर्कने छाटकाट छैन । इटालियन सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुशार उक्त कम्पनी टाटपल्टिएको अवस्थमा रहेको छ । उसको सवै जायजथा सरकारबाट रोक्का भएको अवस्था छ । यसले गर्दा उसले आयोजना सम्पन्न गरेर नेपालबाट लैजाने पैंसा समेत सिधै इटालियन सरकारले लिने अवस्था छ । जसले गर्दा कम्पनीले आफुले काम सम्पन्न गरेपनि आफ्नो हातमा पैसा नपर्ने भएपछि उक्त आयोजना यतिकै छाडन चाहेको र भागेको विश्लेषण गरिएको छ । हुनत यसअघि आयोजना छाडेर किन जान लगेको भन्ने विषयको सोधपुछमा प्रोजेक्ट म्यानेजर ग्रेचोले कम्पनी डुबेपछि देश फर्किन खोजेको बताएका थिए । यसले पनि त्यस कुरालाइ थप बल पुर्याउछ ।
यस्तो अवस्थमा सिएमसी नेपाल फर्किएर पुन काम सुरु गर्नु कठिन देखिन्छ । यो अवस्थमा पुगेको कम्पनीलाइ पुन फर्काउन मन्त्री मगरको पहलले कति सार्थकता पाउला त्यो भने भोली हेर्न बाकि नै छ । सय वर्षभन्दा अगाडि स्थापित सिएमसी इटालीको प्रसिद्ध निर्माण कम्पनी हो । यातायात, खानेपानी तथा सिँचाई, बन्दरगाह, रेल्वेजस्ता भौतिक पूर्वाधार र परियोजनाहरूमा काम गर्दै आएको उक्त कम्पनीको पछिल्लो आर्थिक अवस्थमा भने निकै खराव अवस्थमा पुगेको छ ।
नागरिक लगानी कोषको १ः०.८३ हकप्रद पुस २८ गतेदेखि
धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिप्रति लगानीकर्ताहरुको आपत्ति
दैनिक रेकर्ड तोड्दै सुनको मूल्य